1. Azonao atao ve ny mametraka ny logo na ny anarako tsy manam-paharoa amin'ny vokatra?
Eny, azontsika atao ny mametraka ny logo na ny anaranao eo amin'ny vokatra, na amin'ny peta-kofehy na fanontam-pirinty. Alefaso aminay fotsiny ny logo na ny anarana, hanonona ny vidiny izahay ary hanao santionany ho an'ny famerenanao.
2. Afaka mahazo santionany ve aho?
Faly izahay mandefa santionany ho an'ny famerenanao. Ny politikanay santionany dia ny manome santionany maimaim-poana ary ny mpanjifanay dia mandoa ny vidin'ny iraka. Satria mahazo fangatahana santionany maro isan'andro izahay, sarotra ho anay ny mandoa ny saran'ny fandefasana rehetra. Fa raha tsy mila ny santionany maika, dia afaka mandefa amin'ny alalan'ny air mail amin'ny fandaniana. Ho an'ny fandraharahana maharitra, manome santionany rehetra amin'ny fandanianay izahay.
Izy io koa dia fomba tena azo ampiharina amin'ny fankatoavana ny santionany amin'ny sarin'ny saturation avo, haingana sy mety.
3. Inona ny fe-potoana fandoavanao?
na ny raharaham-barotra voalohany sy ny vokatra miaraka amin'ny famantarana ny haben'ny baiko kely indrindra, ny fe-potoana fandoavam-bola dia ny fandoavam-bola feno alohan'ny famokarana sy ny fandefasana. Ho an'ny baiko mihoatra ny habetsahan'ny baiko ambany indrindra, ny fe-potoana fandoavam-bola dia antsasaky ny fandoavam-bola alohan'ny famokarana ary ny antsasany alohan'ny fandefasana na amin'ny faxing ny volavolan-dalàna. Ho an'ny fandraharahana maharitra maharitra sy ny baiko be dia be, dia manaiky ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny Letter of Credit izahay, ary ny fomba fandoavam-bola hafa dia samy nifanarahana.
4. Inona ny habetsahanao farafahakeliny?
Miankina amin'ny vokatra izay alainao sy ny fahasarotan'ny vokatra izany. Mifandraisa aminay raha kely indrindra.
5. Manamboatra vokatra ho an'ny mpanjifa ve ianao?
Eny, manamboatra vokatra izahay, anisan'izany fa tsy voafetra amin'ny loko, ny habeny, ny fomba, ny logo sns.
6. Ahoana ny fametrahana baiko?
Raha hametraka ny baiko, lazao anay ny entana sy ny habetsaky ny ilainao amin'ny alàlan'ny mailaka na antso an-telefaona, holazainay ny vidiny mifanaraka amin'izany. Rehefa voamarina ny vidiny dia halefanay aminao ny faktiora pro-forma sy ny fampahalalana momba ny banky, ary manombatombana ny datin'ny fanaterana, miaraka amin'izay koa, manaova santionany famokarana ho an'ny fankatoavanao, arahin'ny fandaharana famokarana sy fandefasana entana.
7. inona no fampahalalana azontsika atolotra?
Nanana ekipa mpikaroka matihanina sy traikefa izahay, izay afaka manome fampahalalana momba ny vokatra na olana. nanana ekipa varotra matihanina izahay, izay afaka manome izay fomba ho malaza, fivarotana mafana, famolavolana mpanjifa hafa (fa ho an'ny fanondroana fotsiny).
8. inona no fampahalalana azontsika atolotra?
9. Manana mpanjifa lehibe na malaza ve ianao?
Amin'izao fotoana izao, ny mpanjifa marika dia misy: Coca cola, Walmart, Disney, Microsoft, Lenovo, ACER, DII, Miller, Rock start, Heineken, Benz, mpanjifa marobe miara-miasa aminay!
TE HIARA-MIASA AMINAY?
145 TANGU WEST ROAD ,SHIJIAZHUANG CITY ,HEBEI PROVINCE ,CHINA